I-villa yasebhishi, izidlo zelayisi, intabamlilo, ukudla okuhamba phambili +u - I-Airbnb
I-villa yasebhishi, izidlo zelayisi, intabamlilo, ukudla okuhamba phambili +u
yumbing, Mambajao, Camiguin, i-Philippines
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Mark
Ihambisana nokudla okumnandi kwase-Asia, izilungiselelo zemvelo ezimangalisayo namakamelo amadala, i-villa yethu yasebhishi yenzelwe abantu abathanda ukudla, izisebenzi zemvelo, nama-nostalgics. Yakhiwe eduze ne-villa yethu yerayisi paddy kanye nepulazi elidume kakhulu ukuya endaweni yokudlela yetafula, i-Guerrera, izivakashi ziyizinyathelo ezivela kwezinye zokudla okuqabulayo nokusungula kakhulu e-Asia.
Ibekwe ezinyathelweni eziluhlaza nezolile zelayisi usuka olwandle, i-Guerrera iphinde inikeze ukubukeka okuhle kakhulu kwesiqhingi kokubili i-White Island nentaba-mlilo i-Hibok-Hibok.
I-villa yethu yasebhishi yaphothulwa ngo-2017 futhi ihlezi ohlangothini lwebhishi yesihlabathi esimnyama esifihlekile futhi inombono oqondile wesiqhingi esimhlophe. Ibuye ibe nompheme wophahla one-sunscreen yezinga lolwandle, ubhavu wabantu abangu-2, netafula lokudlela elinamathayili ase-Spain - lapho ungahlala khona nganoma iliphi ihora losuku futhi uthole ukubuka okungu-360* kolwandle, indawo yethu yokudlala irayisi entabeni yentaba-mlilo ye-hibok-hibok. Ngeke uthole enye itafula enokubukwa okunjalo noma kuphi esiqhingini.
Ilanga liphuma phambi kwakho futhi ungathola isidlo sakho sasekuseni ubukele i-Guerrero i-buffalo yamanzi, izimbuzi zethu, amadada, izinkukhu, amahhashi, izimfudu nezinye izilwane eziningi njengoba ziqala usuku lwazo.
Ukusuka lapho, ungajabulela konke okuhlinzekwa yi-Camiguin, kusuka ekuqwala izintaba, izimpophoma, ukutshuza, nohambo oluya esiqhingini esimhlophe, imizuzu engu-5 nje ukusuka ku-villa yakho.
Ezinye izakhiwo ezimbalwa e-Philippines zinikeza noma yini efana nayo futhi yingakho inenani eliphansi ngendlela enjalo. Njengabahambi abavamile ngokwethu, siyazi ukuthi kunezikhathi zokonga kanye nezikhathi zokuphila okunambithekayo ngempela nokuphila okunambithekayo -- futhi lokhu kungenye yazo.
Yini efana nayo? Uma uhlanganisa i-Bali (seminyak ne-bud) neFiji futhi wanezela okuncane kwe-Massachusetts futhi ekugcineni, i-Hoi an, ekwamukeleni kwethu izihambi okungekuhle kwase-Philippines... bese unikeza ipulazi elihamba phambili emhlabeni wonke endaweni yokudlela yase-Asia eqhele ngamamitha angu-10 lapho umpheki oqeqeshiwe we-cordon uzokuphekela khona futhi usebenza njengombungazi wakho onomusa... khona-ke uzoba seduze kakhulu.
Isibuyekezo selayisi: ngokungafani nezindawo eziningi e-Umbd eshiwo ngaphambilini, izidlo zethu zelayisi azigcinwanga nje ngezinjongo zokuhlobisa njengoba lonke ilayisi esikhulayo lisetshenziswa endaweni yethu yokudlela. Asigcini ngokuthi "siyigcine iluhlaza" ngamakhamera futhi ngaleyo ndlela, idlula ezindaweni zemvelo lapho ishintsha khona umbala nesimo futhi idlula ngezinkathi zokuhlanza nokuphumula phakathi kwezitshalo. Ayikho indlela yokusetha isimiso kulezi zikhathi, njengoba kuncike emvuleni, ukutshuza emanzini, ilanga, umoya ngisho nezinyoni! Kodwa kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ukusivakashela nini, sithemba ukuthi kuzoba okokuzithokozisa kwemvelo okuyingqayizivele.
Ezinye izizathu zokucabangela indawo yethu...
Bheka, ake singayitholi i-shukela. Uma uvela phesheya futhi uhamba e-Philippines futhi ulindele ukuthola ukudla okumangalisayo nokujabulisayo oye wakujabulela kwamanye amazwe ase-Asia, kunethuba elihle lokuthi uzodumala kakhulu. Abantu abangayidli inyama bangalindela izinselele eziningi nakakhulu. Akekho okukutshela lokhu ngokuqondile ezincwadini zeziqondiso nakumawebhusayithi kodwa uzokuthola ngokushesha futhi uzochitha isikhathi esiningi kunalokho obukulindele uma ufuna ngisho nezindawo ezihloniphekile zokudla. Uzothola iningi (kodwa hhayi lonke) ukudla kwase-Philippines ukuthi kube ukunambitheka okutholwayo kanye nezinguqulo zayo zendawo zokudla kwasentshonalanga, okumangazayo nokubuhlungu ngokusebenza kwayo kwezithako eziphroseswe, ezingabizi, nekhwalithi ephansi.
Uma uthola isakhiwo esenza ipuleti elihloniphekile le-pasta noma okunye okujwayelene nakho, uzojabula futhi cishe uzolilinganisa ngokweqile, ngenxa nje yokuthi liyakwazi ukudla.
Faka i-Guerrera, lapho sisungula khona ukudla kwethu kanye nokudla okujwayelekile okuvela e-Thailand, e-Vietnam, e-India, e-Indonesia nase-Malaysia, kukhuliswe izithako eziningi khona kanye egcekeni futhi sikwenze konke ngezandla... futhi manje usunayo indawo yokuya kuyo kungakhathaliseki ukuthi uvelaphi, uthola ukudla okuhle, okusha, futhi okuthakazelisayo, kunalokho onakho @ ekhaya... okukhonjiswe endaweni enhle engokwemvelo esegcekeni layo, ngamanani angeke adinge ukuthi ugeze izitsha ngemva kokudla. Uma ufana neningi lezivakashi zethu ezisitholayo, uzobe udla okungenani u-75% wokudla kwakho e-Guerrera, futhi leso yisizathu esiyinhloko esenza sakhe lezi zindawo zokuhlala endaweni yokuqala. Abantu baqhubeka besicela ukuba sibafake ukuze kungabi nesidingo sokugibela besuka noma kuphi lapho bebehlala khona.
Sicela uqaphele: siphinde sikhiphe isidlo sasekuseni ezivakashini zobusuku kodwa khumbula ukuthi sidinga i-oda lobusuku bangaphambi komhla ka- njengoba izisebenzi zethu zivame ukumatasa zilungiselela ukuvula indawo yokudlela phakathi kwemini.
Siyaziqhenya kakhulu ngesimo esihlukile sama-villa ethu, okungeyona yesimanje, yendabuko, noma yezentengiselwano. Iklanyelwe ukuvusa isikhathi sangaphambili, esicothayo, ihlanganisa amathayili ase-Spain, izibani zase-Vietnam, ama-shutter asekoloni, amasilingi e-bamboo kanye ne-hardwood yendawo ehlelwe ngezandla. Imininingwane eyingqayizivele iyanda njengoba cishe yonke into yakhiwa egcekeni, ngesandla.
Amasevisi esimanje ahlanganisa i-WiFi, i-air-conditioning namanzi ashisayo kokubili ishawa nobhavu wangaphandle, i-mini-refrigerator, namanzi amahhala nekhofi. I-TV ithathelwe indawo yishelfu lezincwadi eligcwele ukuze uzivuselele. Isignali yethu ye-WiFi ayinamandla kakhulu emhlabeni kuzo zonke izindawo kodwa nge-Camiguin, iqinile kakhulu. Izivakashi zingathola isignali emphemeni nasendaweni yokudlela, kodwa iyashesha ngaphakathi kwe-villa yethu ekude kakhulu.
Indawo: sisendaweni eyingqayizivele kakhulu esiqhingini lapho siseduze kakhulu nezindawo ofuna ukuzibona kodwa hhayi kuze kube manje ukuthi kufanele ube nebhayisikili ngaso sonke isikhathi. Iphephile kakhulu futhi iyimfihlo ngokwedlulele njengoba ingathi kanye nomakhelwane abashadile kanye nabadobi kuleli bhishi elifihlekile.
Imibhede: sikholelwa ukuthi isevisi eyodwa ebaluleke kakhulu uma uvakasha ekhaya lomuntu noma ihhotela yikhwalithi yokulala ehlinzekwa ngumbungazi. Yingakho sinikeza omatilasi be-memory foam kuwo wonke ama-villa namashidi amahle kakhulu. Bahlezi phezu kwesakhiwo sokwakha uhlaka lombhede lokhuni oluqinile ukuze noma ngabe yini oyenzayo ngosuku lwakho, ungaqiniseka ukuthi uthola ukulala okumnandi ebusuku uma ubuyela e-Guerrera.
Kulula impela, i-Camiguin isiqhingi esihle kunazo zonke e-Visayas ngoba ukuthuthukiswa okungathuthukisiwe kulondoloze ubuhle bayo bemvelo obuhlaba umxhwele. Lapho ngezinye izikhathi kunezindawo ezikhangayo ezenziwe ngabantu lapho umklamo ungaba khona isilinganiso futhi ukuhlanzeka nokuphathwa kungahluka. Lesi siqhingi, kwabaningi, "i-anti-Boracay" futhi sinokufana okuncane nokuhweba okungahloliwe kwe-Panglao, i-Bohol--umakhelwane wase-Bohol ngaphesheya kwesimo.
Kuzwakala njengesiqhingi sase-Hawaii esinesihlabathi sentaba-mlilo, indawo eluhlaza okotshani kanye nezindawo ezinesibindi. Kodwa qonda ukuthi le ndawo ithula kakhulu futhi kuncane ongakwenza ngaphandle uma uthanda imvelo noma ungumuntu omatasa futhi osebenzayo ongadingi ukuxhunywa ngaso sonke isikhathi ukuze azizwe exhunyiwe. Uma ungumculi noma udinga nje isikhathi sokuphumula, uzosithola lapha.
I-vibe ku-camiguin ihlanzekile futhi kunabantu abavela kuwo wonke umhlaba abaye bakhetha ukwenza amakhaya namabhizinisi lapha. Umuntu angangena kalula ku-yoga, ukutshuza, ukuhamba ngezinyawo neminye imisebenzi ejabulisayo. Izakhamuzi ziyakujabulela ukwabelana ngesiqhingi nabo bonke abanye abahlonipha isiqhingi.
Indawo yethu: sisendaweni ephakathi nendawo, sisemizuzwini engu-5 ukusuka esiteshini esimhlophe sesiqhingi esiseduze ne-Paras resort. Ukuba sendaweni yerayisi paddy, sinikeza ubumfihlo obuphezulu. Cishe kufana nokufihla endaweni ecacile, ukuba seduze nakho konke, kodwa kusahlukene ngokuphelele.
Ukuphepha okulinganiselwe nokufinyeleleka: Indawo yethu iphansi kakhulu futhi ( ekugcineni) iphawulwe kahle, ngakho-ke njengoba uhamba esiqhingini akudingeki ukhathazeke ngokulahleka noma ukudlula endaweni engaphezi ukuze ufinyelele kithi. Uma ungazange ususe ibhayisikili lesithuthuthu ngaphambilini, lokhu kuyinto okufanele uyikhumbule lapho ukhetha indawo njengoba sinezingozi nsuku zonke ku-camiguin.
I-acoustics yesiqhingi: kunezikhathi zonyaka lapho umculo ungazwakala kahle ngisho nasebusuku njengoba abantu bejabulela ama-fiestas neminye imicimbi yomphakathi. Nakuba singasho ukuthi azikho izindawo ezizwakalayo ze-karaoke noma kuphi eduze nathi, akukho esingakwenza lapho isiqhingi esivulekile futhi sicela ukuthi izivakashi zithinte. Okungenani unomatilasi omuhle kakhulu ku-camiguin yokulala!
Okungenani omunye wethu uhlezi eseduze njengoba indlu yethu/i-resto iseduze kakhulu ne-villa futhi ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nathi nezivakashi zendawo yokudlela njengoba uthanda. Unobumfihlo obuphelele futhi akudingeki ukhathazeke ngokwabelana ngendawo nanoma ubani. Uma uthanda imidlalo yebhodi, ungajoyina nge-mahjong, i-monopoly noma eminye imidlalo yendawo ngendlela othanda ngayo.
Okungenani omunye wethu uhlezi eseduze njengoba indlu yethu/i-resto iseduze kakhulu ne-villa futhi ungazizwa ukhululekile ukuxhumana nathi nezivakashi zendawo yokudlela njengoba ut…
Hlola ezinye izinketho ezise- yumbing, Mambajao namaphethelo